December 6, 2018 – Bharosa Media
माइक्रोबसको ठक्करबाट काठमाडाैंमा बालिकाकाे मृत्यु
December 6, 2018	Leaveacomment 118 Views
काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिका–२६ सरकारीधारामा माइक्रोबसको ठक्करबाट एक बालिकाको मृत्यु भएको छ।सामाखुशीको सडकमा विहिबार बा१ज ८४५९ नं को माइक्रोबसको ठक्करबाट झापा केचना गाउँपालिका–३ की तीन वर्षीय बालिका जिया यादवको मृत्यु भएको हो। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका सहप्रवक्ता जितेश दाहालका अनुसार गम्भीर घाइते यादवको उपचारका क्रममा कान्ति बाल अस्पताल, महाराजगञ्जमा मृत्यु भएको हो। चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान थालेको छ। रासस
December 6, 2018	Leaveacomment 129 Views
काठमाडौँ — दोलखा भिमेश्वर नगरपालिका ५ मा रहेको विसुन्टोल आधारभूत विद्यालयका २० बालबालिकालाई न्यानो कपडा वितरण गरिएको छ । अमेरिकाको भर्जिनियामा बस्दै आएका नेपाली बालबालिकाहरूले तिहारमा देउसी–भैलोबाट जम्मा गरेको रकमबाट कपडा वितरण गरिएको हो । २२ हजार ३ सय ३२ रुपैयाँबाट किनिएको कपडा भीमेश्वर नगरपालिकाका उपमेयर कमला बस्नेत र अभियन्ता नीता राउतले संयुक्त रुपमा हस्तान्तरण गरे । बालबालिकालाई निरन्तर विद्यालय आउन यस कार्यक्रमले ...
December 6, 2018	Leaveacomment 127 Views
काठमाडौँ । यदि कुनै शक्तिकेन्द्रले चमत्कार देखाएन र अभियुक्तको बयानलाई प्रहरीभित्रै गुपचुप राखिएन भने केही समयमै सुडान र सुनकाण्डभन्दा पनि डरलाग्दो एउटा काण्ड पटाक्षेप हुँदैछ । बयान दिने व्यक्तिहरूको मानसिक सन्तुलन ठीक छैन, कसैको उक्साहटमा बकाइएको प्रमाणित भए अर्कै कुरा, नत्र अब प्रहरीभित्र हलचल मच्चिने घटना टर्न मुस्किल भएको अनुसन्धानरत प्रहरीहरू बताउँछन् । अपराधीको बयान हो, ‘नागरिक अगुवा तथा पत्रकार ...
जमिनमुनिको पानी धेरै तान्दा के हुनसक्छ ?
December 6, 2018	Leaveacomment 138 Views
जमिनमुनिबाट अत्यधिक मात्रामा पानी तान्यो र भूमिगत पानी ‘रिचार्ज’ हुन पाएन भने त्यसको परिणाम के हुनसक्छ? यसको पछिल्लो उदाहरण इरानको राजधानी तेहरानमा देख्न सकिन्छ। पश्चिम एसियाकै सबभन्दा बढी जनसंख्या भएको यो सहर केही समययता निरन्तर भासिँदै गएको छ। भूगर्भ वैज्ञानिकहरूले स्याटलाइट तस्बिर विश्लेषण गरी तेहरानका केही भाग वर्षको २५ सेन्टिमिटरका दरले भासिँदै गएको बताएका छन्। जर्मन रिसर्च सेन्टरका भूगर्भ वैज्ञानिकहरूले ...